Ireo mpankafy axial sy kojakoja
Ny maodelin'ny fampiasana dia mifandraika amin'ny hamandoana afovoan'ny tanana
Ny haitao fanalefahana afovoan-tany, ao anatin'izany ny akorandriaka ivelany, voafaritra ao amin'ny akorandriaka ivelany ny Fikirana anatiny dia tsy misy zavona, ary takelaka zavona napetraka ivelan'ny sakelika, voalaza ao amin'ny bara mpanohana eo ambanin'ny fifandraisana misy casing ivelany, ary apetraka ny ambany ...
Te hahafantatra ny fomba fiasan'ny hamandoana afovoany?
Ny fitsipiky ny hamandoana afovoany dia ny lovia rotary afovoany mihodina amin'ny hafainganam-pandeha avo lenta eo ambanin'ny fihetsiky ny motera, ary ny rano dia hariana mafy amin'ny lozisika atômika, ary ny rano fantsom-batana dia atômika ho 5-10 microns an'ny singa ultrafine ary noroahina avy eo. Taorian'ny blo ...
Fanamainana Patio Gas dia manome aina bebe kokoa ny fiainana
Ny fanamainana patio gazy dia mety ho fanampiny mahafinaritra amin'ny tranonao sy ny patio anao ary afaka manome hafanana amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona. Ny heater patio etona dia ilaina indrindra amin'ny ririnina, satria manome rano mafana sy hafanana eo amin'ny patio, izay matetika mangatsiaka ety ivelany. Ireo ...
Ahoana no hisorohana ny adin-hafanana?
avy amin'ny admin tamin'ny 20-05-20
Fanafanana herinaratra mitondra fanamaivanana ho an'ny fanafanana any ivelany
Vidin'ny gazy. Teny roa izay mety hiteraka tahotra na dia amin'ny kitapo salama indrindra aza, ary amin'ny fomba izay mety tsy noeritreretinay hatrizay. Ohatra iray amin'izany ny fanafanana any an-tokotany. Raha samy hafa karazana heaters etona etona ivelany misy ny Infrared Heater sy ny Propane Heater ho an'ny faritra ivelany ...
INONA INDRINDRA NY fahasamihafana eo amin'ireo mpankafy zavona sy mpanafika an'habakabaka?
Mikasika ny fahasamihafana lehibe indrindra eo amin'ny mpankafy zavona sy ny mpanamory rivotra, izany hoe, ny mpankafy zavona dia mampiasa teknolojia afovoany fa tsy teknolojia avo lenta, mba hahafahanao mamakivaky azy mora foana araka izay irinao nefa tsy afaka ny rivotra. Fa indrindra miteny, ny mpankafy misting ankoatr'izay dia mankafy ny ...
Adress:No. 388 Linruo Road, Songmen Town, Wenling City, Faritanin'i Zhejiang